Wasaaradda Kalluumeysiga oo tababar u qabatay kalluumeysatada gobolka Banaadir – Radio Muqdisho
Wasaaradda Kalluumeysiga oo tababar u qabatay kalluumeysatada gobolka Banaadir
Wasaaradda kaluumeysiga iyo kheyraadka Badda ayaa Muqdisho tababar uga furtay xubno ka tirsan kalluuneysata gobolba Banaadir.
Munaasabaddii Furitaanki tabarka ayaa waxaa ka qeybgalay qaar ka mid ah sii hayayaasha xilka wasaaradaha dowladda iyo aqoonyahano ku xeel dheer cilmiga badaha oo bixinaya tababarka.
Agaasimaha guud ee wasaaradda kalluumeysiga Axmed Maxamed Iimaan ayaa sheegay in tababarkan ay kaluumeysatadu ku baran doonaa sidii ay naftooda u badbaadin lahaayeen xilliga ay ku guda jiraan howlaha jillaabashada, iyo sidii ay gacan uga geysan lahaayeen ilaalinta xeebaha dalka.
Sii hayaha xilka wasaaradda Beeraha Cabdi Axmed Baafo oo ka hadlay munaasabaddii furitaanka shirka ayaa sheegay in tababarkaani uu kaalin muhiim ah ka qaadanayo horumarinta kaluumeysatada, wuxuuna ku dhiirigeliyay kalluumeysatada in aqoonta ay ka kororsadeed tababarka ku dabaqaan shaqadooda.
Tababarkan loo qabtay kalluumeysatada gobolka Banaadir oo shalay ka furmay Muqdisho ayaa socon doono muddo Lix maalmood ah.